PlexEarth, Waa maxay nooca 2.5 ee loogu talagalay sawirrada Google Earth - Geofumadas
PlexEarth, kaas oo keenaya version 2.5 ee Google Earth for images
Sebtember, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, tabo cusub
Waxaa la sifeeyay sifooyinka kaasoo keenaya nooca cusub ee PlexEarth, kaas oo la filayo in lagu dhawaaqo dhamaadka Oktoobar ee 2011.
Sababta ugu weyn ee qalabkani u yeeshay aqbalaad la taaban karo ayaa ah inuu xaliyo waxa barnaamijka ugu caansan ee CAD (AutoCAD) uusan ku sameyn karin aduunka ugu dalxiiska badan (Google Earth), waxayna ku sameysaa sida ugu nadiifsan ee aan heysano. arkay for CAD dhufto ee. Wixii ugu fiicnaa ee aan soo arko ku xiro AutoCAD Google Earth.
Waa inay lahaato kartida buuxda ee ku jirta Google Earth iyo qalabka dhismaha ee AutoCAD.
Waan ogaa tan ugu horeysay ee PlexEarth bishii November ee 2009, kadibna version 2.0 bishii Maajo ee 2010, kadib markii aan aragney isbeddello yar, kaliya waxaan ku taageereynaa inaan ku ordo AutoCAD 2012, laakiin dhowr bilood ayaan arki doonaa 2.5 version.
Mid ka mid ah abuurayaashii ayaa ii sheegay, oo aan rabo inaan wareysi rasmi ah ku yeesho Amsterdam bishii Nofembar, hagaajinta ku jirta nuqulkan ayaa loogu talagalay iyada oo ku saleysan "waxa ugu codsata" dadka isticmaala hadda.
Awoodda ballaaran ee daaweynta sawirrada.
Waxaan aragney PlexEarth ka hor intaadan sameynin wax kaliya oo keliya 3D ama CivilCAD, laakiin kiiskani wuxuu ku yimaadaa awoodo oo kaliya oo la sameyn karo Design Raster iyo tan nooc kasta oo muuqaal ah, ma aha oo kaliya laga keeno Google Earth.
Sawir sawirada (isku dar). Hadda, waad qaadan kartaa sawirro muusig ah oo waxaad ku biiri kartaa mid leh magac cusub oo aad ku ilaalineyso muuqaalka.
Sawirrada dalagga (dalagga). Iska yaree qayb sawir ah oo ku saleysan geesooleyaal, adoo ilaalinaya jaangooyada, iyo marka lagu daro aaladdii hore, sawirrada waxaa lagu dhisi karaa iyadoo lagu saleynayo joomatari gaar ah, oo aan daruuri u ahayn leydi. Waxay ku habboon tahay in laga saaro meelaha aanu Google Earth lahayn caymis wanaagsan.
Bedel sawirada (bedelo). Haddii ay dhacdo inaan sawir ka soo dejisannay Google Earth, ka dibna aan haysanno caymis cusub, waxaan codsan karnaa cusbooneysiin isla aagga ah iyada oo aan loo baahnayn inaan mar kale qeexno. Waxaan sidoo kale arkaa wax badan oo suurtagal ah shaqadan, haddii aan rabno inaan ku soo dejino sawir xallin sare leh Google Earth Pro, inkasta oo ay tahay isku-daboolista isku midka ah, xalinta pixels waa mid aad u wanaagsan marka loo soo dhoofiyo AutoCAD.
Waxa kale oo ay suurtagal tahay in la soo dejiyo iyo dhoofinta sawirada inta lagu hayo madax kororsiga.
Hagaajinta isticmaalka moodooyinka dhijitaalka ah.
Sidii aan ugu sharraxay qoraalkeyga 2.0, PlexEarth wuxuu ka soo dejisan karaa moodel dijitaal ah Google Earth, wuxuu abuuri karaa sagxad, khadadka dusha sare, xisaabinta mugga, iyo waxyaabo kale oo ay sameeyaan 3D-ga rayidka ah. Si kastaba ha noqotee, wax aan raaxo lahayn ayaa dhacaya, taasina waa taas Google Earth banea el Kulanka Aqoonsiga markii aad sameyneyso jumlo soo dejiso. Tan si weyn ayaa loo saxay, qalabku wuu ogyahay tirada ugu badan ee dhibcaha ee Google Earth u oggol yahay inuu soo dejiyo, wax yar uun ka hor intaan la dhammaystirinna, wuu xidhayaa oo dib u furayaa Google Earth, kaas oo cusub Kulanka Aqoonsiga Waxay u gashay si nadiif ah oo loo siideyn karo malaayiin dhibcood dhib la'aan.
Isbedelka foomka ruqsadda
Hadda ee PlexEarth, halkii ay ka muuqato qaybaha sanadlaha ah Standard, Pro iyo Premium, saddex nooc oo shati ah ayaa la soo jeediyey:
Liisanka billaha ah, aad u jaban Tan, baahida loo qabo mashruuc gaar ah ayaa lagu xallin karaa, iyada oo aanad bixin liisanka muddo dheer, iyada oo awood u leh inay ka faa'iideysato dhammaan kartida aysan AutoCAD lafteeda bixin.
Shati sanadle ah. Waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha had iyo jeer ka shaqeeya mawduuca, inta udhaxeysa sahaminta, injineernimada, juqraafiga iyo cadastre.
Ruqsad joogto ah Tan waxaa loogu talagalay kuwa rumaysan in qalabku lagama maarmaan u noqon doono shaqada joogtada ah.
Dalka Spain waxaad ku qaadan kartaa liisanka CADMax
Dalka Czech iyo Slovakia waxaad iibsan kartaa CADStudio
Iyo gudaha Maraykanka CommTech
Waddanka Laatiin, halkan ayaad ka heli kartaa Download PlexEarth
AutoCAD 2012 3D Google Earth PlexEarth
Post Previous" Hore Maxaa Cusub ee MobileMapper Field iyo MobileMapper Office
Post Next Digniin ah emails been ah oo lagu magacaabo GeofumedNext »